AKINCI TİHA Rakitra fanadihadiana, Bayraktar sy Mpitaoninja dia nilaza | RayHaber | raillynews
HomeTORKIACentral AnatoliaAnkara 06AKINCI TİHA Horonantsary fanadihadiana, Bayraktar sy injeniera
22 / 05 / 2020 Ankara 06, Central Anatolia, ANKAPOBENY, Weather, Headline, fiarovana, TORKIA, VIDEOS
Horonantsarin'i Akinci tiha, Bayraktar sy ireo injeniera
Fiaran'ny fiaramanidina an'habakabaka voalohany tao Torkia fa Bayraktar AKINCI tiha ny fivoarana nandritra ny volana maromaro nanehoana ny rakitra "AKINCI" 24 Mey 2020 Alahady, andro voalohany Ramadany, ny You Baykara amin'ny 20.23:XNUMX oraTube halefa amin'ny fantsona.
ny fetra fitsikerana ny indostrian'ny fiarovana any Tiorkia dia hitarika amin'ny iray amin'ireo tetikasa manan-danja indrindra izay mihoatra ny asa fampandrosoana an'i Tiha AKINCI Bayraktar (manafintohina UAV) no lohahevitra iray. Ny fivoaran'ny Bayraktar dia namolavola fiara an'habakabaka voalohany tsy navoakan'ny kilasy manafintohina an'i Tiorkia sy ny mpanao bisikileta "AKINCI" anarana nomena ny andian-dahatsoratra an-tsarimihetsika voalohany.
Ilay mpiasan'ny teknikan'ny Baykar Selcuk Bayraktar dia namoaka lalana roa nampiroborobo ny horonantsary avy amin'ny kaontiny media sosialy. Ilay horonantsary fanadihadiana, izay mamaritra ny dingana famokarana sy fivoaran'ny Bayraktar AKINCI TİHA, ny alahady 24 mey 2020, andro voalohany amin'ny Eid al-Fitr, antsoina hoe "Baykar Technologies" nataon'i Baykar amin'ny 20.23.Tube Halefa eny amin'ny fantsona io voalohany io.
Naharitra 6 volana ny filma
Ho an'ny fanadihadiana, tarihin'i Altuğ Gültan sy Burak Aksoy, dia notanterahina nandritra ny volana maro tany Airportorlu Airport Command ny fifampitifirana izay nametrahana ny Baykar Milli S / İHA R&D ary trano famokarana any Istanbul sy Bayraktar AKINCI TİHA. Ny tetikasa fanadihadiana, izay nanomboka tamin'ny febroary 2019, dia vita tao anatin'ny 15 volana. Mifototra amin'ny vanim-potoana niasa mafy sy sahirana nandritra ny 6 volana farany teo ny tranomboky fanadihadiana, rehefa nanao ny sidina voalohany i Bayraktar AKINCI.
Bayraktar sy injeniera nitantara
Ao amin'ny lahatsary fanadihadiana, Baykar Technical Manager Selçuk Bayraktar sy ireo mpitarika ny vondrona injeniera dia mamaritra ny asa vita amin'ny dinidinika amin'izy ireo. Ny fizotry ny fananganana fiaramanidina miaraka amina haitao avo lenta miaraka amin'ireo dokambarotra avo lenta no hifanena amin'ny mpihaino.
Ringana roa no hanidina
Ny prototype voalohany an'ny Bayraktar AKINCI, PT-1, dia nanao sidina faharoa ho ampahany amin'ny fanamarinana ny System tamin'ny 10 Janoary 2020. Ny AKINCI Bayraktar faharoa, izay nahitana ny fampidirana azy vao haingana ary nantsoina hoe PT-2, dia nalefa tany amin'ny Çorlu Airfield Command izay nitohy ny asa fitsapana. Ny fitsirihana ny rivotra sy ny herin'ny Bayraktar AKINCI TİHA dia ho tanterahina miaraka amin'ny prototipe roa.
Ho lasa iray amin'ny firenena telo i Torkia
Namboarina i Baykara niaraka tamin'ny traikefa sy ny haitao amin'ny fampandrosoana ny fiara fiaramanidina tsy manam-paharoa UAV AKINCI Bayraktar, izao tontolo izao dia hanao an'i Torkia ho iray amin'ireo firenena 3 voalohany hamolavola fiara tsy an'habakabaka tsy voatanisa ao amin'ity kilasy ity. Ny Bayraktar AKINCI, izay afaka mijanona ao anaty rivotra mandritra ny 24 ora ary manana valindrihana serivisy misy tongotra 40 400, dia mivoaka miaraka amin'ny maherin-tseranana 950 kilao, ao anatin'izany ny 1.350 kilao anatiny ary 5.500 kilao ivelany. Bayraktar AKINCI TİHA, izay misy lanja 2 450 kilao, miakatra aty an-danitra miaraka amin'ny motera turboprop 2 misy herinaratra 750 HP. Ny Bayraktar AKINCI TİHA koa dia natao hanidina amin'ny fanamboarana samihafa amin'ny milina mamokatra 2 × 240 HP ary herinaratra HP × XNUMX × XNUMX novokarin'ny TEI.
Hanao ny iraka mandeha amin'ny rivotra
Ny sehatra fiaramanidina, izay manana elatry ny elatra 20 metatra miaraka amin'ny rafitry ny elatra mitongilana tsy manam-paharoa, dia hanome fiarovana tsara ihany koa noho ny fifehezana fiaramanidina tanteraka sy ny rafitra mpanamory fiaramanidina 3 mena. Bayraktar AKINCI, izay afaka manatanteraka adidy miaraka amina nasionaly izay hitondra fisaorana azy noho ny fahaiza-mitondra tena ilaina, dia ho hery lehibe miaraka amin'ny fahaizany handoro ny basim-pirenena novolavolaina ho an'ny paikady stratejika toy ny balafomanga SOM. Bayraktar AKINCI, izay hanana fahatsiarovan-tena avo lenta miaraka amin'ny radar AESA famokarana an-trano hita ao amin'ny orona, dia afaka manatanteraka fandidiana miaraka amin'i Gökdoğan sy bala fiaramanidina an'habakabaka ao Bozdoğan novolavolain'i firenena TENBİTAK SAGE. Ny seranam-piaramanidina, izay hitondra entana manakiana toy ny fakan-tsary EO / IR, radara AESA, Beyond Line of Sight (satelika) ary rafitra fanohanana elektronika, dia hanana ihany koa ny fivoaran-toetra artifisialy manintona.
Hanidina amin'ny hakingan-tsaina amin'ny asa tanana
Izy io dia afaka manangona vaovao amin'ny alàlan'ny firaketana ny angon-drakitra azony avy amin'ny sensor sy cameras amin'ny fiaramanidina amin'ny alàlan'ny solosaina 6 intelivery. Ity rafi-pitsikilovana artifisialy ity, izay hahafahanao mamantatra ny zoro amin'ny fitodihana, ny mitsangana ary ny loha an'habakabaka nefa tsy mila sensor na ivelany na Global Positioning System (GPS), dia hanome fampahafantarana tontolo iainana amin'ny fampahalalana momba ny jeografika. Ny rafi-tsaina manampahaizana mandroso dia hahavita handraisana fanapahan-kevitra amin'ny alàlan'ny fanodinana ny angona azony. Ity rafi-tsaina manampahaizana ity, izay ahafahana mamantatra ireo tarehin-tany izay tsy ho hitan'ny mason'ny olombelona, ​​dia hampiasa kokoa ny Bayraktar AKINCI.
Ho mpitarika ny fahaiza-manao Radar
Miaraka amin'ny radar AESA eo an-toerana, Bayraktar AKINCI TİHA, izay afaka manatanteraka asa miaraka amin'ny fahatsiarovan-tena avo lenta, dia ho afaka maka sary miaraka amin'ny Synthetic Aperture Radar na amin'ny toetr'andro ratsy aza izay misy ny rafi-pifidianana elektronika dia sarotra amin'ny fakana sary. Ny lampihazo fiaramanidina, izay hampiditra ny radar meteorolojika ary ny radar toetrandro manana ny tanjon-tanana, no ho mpitarika ao anatinny kilasy misy azy ireo.
Ny Ministera Bayraktar dia gaga tamin'ny Centre Trabzon Logistics Centre
Ordu Boztepe fanadihadiana amin'ny kabine kabary (Video)
Tetikasa fanadihadiana momba ny tetikasa Marmaray Istanbul ao amin'ny Discovery Channel.
Architects sy Engineers Group Kadıköy-Kartal dia nilaza ny momba ny lalàny!
Nuri Demirağ Fanadihadiana ny lalamby voalohany mpiantoka fanorenana ny Repoblikan'i Torkia
Tranonkala momba ny Tranom-baomiera ao an-toerana
Fanadihadiana Marmaray avy amin'ny ZDF Channel
Horonantsary fanadihadiana no hotontosaina rehefa tapitra ny Tetezan'ny Tandrefana
Ireo mpikaroka dia nandinika ny asa an-dalambin'i Istanbul-Gebze-Orhangazi-Izmir
Metroray General Manager Cengiz razambe lalamby sehatry ao Torkia dia milaza ny rafitra
Emniyet's Bayraktar TB2 UAV dia miasa